Mmemme 11 nke ehihie
| 180 njegharị
Na ụtụtụ njem na Haridwar si Delhi site na Meerut na Roorkee. Mgbe ị bịarutere, lelee ụlọ nkwari akụ ahụ. Ka oge na-aga, na-eleta na Harye Pauri bụ ndị na-asọpụrụ Aarti Darshan. Mgbe nke ahụ gasịrị, jiri obi ụtọ nọrọ n'ụlọ nkwari akụ.
Zipu nri ụtụtụ, ụgbọala Barkot site na Dehradun na Mussoorie. En-ụzọ, na-eri nri ehihie na Mussoorie wee gaa n'ihu njem ahụ. Ị ga-eru Barkot na mgbede, mgbe ị bịarutere ịbanye n'otu ụlọ ezumike Switzerland maka otu abalị.
DAY 03: BARKOT - YAMUNOTRI - Ụlọ ahịa 42 KMS DRIVE / 6 KMS TREK.
Na ụtụtụ mgbe ụtụtụ nri ụtụtụ gasịrị, gbapụ maka 42 kms ụgbọala gaa Janki Chatti. Mgbe ị rutere, malite 6 kms trek gaa Yamunotri. Ozugbo ruru, gaa n'ụlọ nsọ Yamunotri isi maka darshan; gbanye aka gị ma kpọọ isi ala n'ihu Nwunye Yamuna, ma nweta ngọzi ya maka njem ahụ. Mgbe ị na-asọpụrụ, na-aga azụ Janki Chatti na mgbede. Site n'ebe a onye ọkwọ ụgbọala anyị ga-akpọghachi gị na Barkot, ebe ahụ ị ga-enwe obi ụtọ n'otu abalị n'ime ebe obibi ahụ.
Malite n'ụtụtụ na 82 kms ogologo ụgbọala gaa Uttarakashi. Na njem ahụ gaa na Prakateshwar Cave, ebe a na-emepụta ihe na-eme ka e nwee ihe ndị dị ka Shivling dị nsọ. Mgbe ị rutere Uttarakashi, lelee n'ime ụlọ nkwari akụ. Na nleta mgbede na Vishwanath Temple ma mesịa laghachi na họtel maka otu abalị. Uttarakashi: Ọ dị na akụ nke Osimiri Bhagirathi ma nye ya dị iche iche. Ụlọ arụsị dị iche iche. Iji kpọọ Vishwanath ole na ole, Ekadash Rudra, Bhairav, Gyaneshwar na Ụlọ Kuteti Devi.
DAY 05: UTTARKASHI - GANGOTRI - UTTARKASHI (100 KM ONY SIDE)
Mbanye Gangotri n'isi ụtụtụ. Mgbe obula rutere, wepu mmiri nke miri iyi nke Ganges, (nke a makwaara dika Bhagirathi). Na-eme ememme ndị ahụ dị iche iche ma gbanye na ebe mara mma ma dị jụụ nke ebe ahụ. N'ehihie ehihie ịlaghachi na Uttarakashi ma lelee n'ime họtel ahụ mgbe ị bịarutere.
Mgbe ụtụtụ nri ụtụtụ, ụgbọala Guptkashi. A na-ebute nri ehihie na Molgarh / Tilwara / Ghansali. Na ụzọ, lee obodo Tehri ihe nketa na-eji nwayọọ nwayọọ na-abanye n'ime mmiri dị egwu nke Osimiri Osimiri Osimiri n'ihi na e wuru Tehri Dam. Were oge ezumike nri ma gaa n'ihu njem gị na echiche dị ebube nke Mandandini mara mma. Ị ga-eru Guptkashi site na mgbede. Mgbe ị bịarutere ịbanye n'ụlọ nkwari akụ ma nwee ntụrụndụ n'abalị.
Na mgbede ụtụtụ gaa Gaurikund (32 kms site n'otu akụkụ). Mgbe ị bịarutere, ị ga-aga n'ụzọ zigzag. En-ụzọ nri ehihie a na-eme na Rambara. Ịnweta nri ehihie ka na-aga n'ihu na Temple nke Kedarnath. Mgbe ị bịarutere, lelee n'ime ụlọ nkwari akụ ma ọ bụ ụlọ ala ndị nleta. Freshen ma gaa na Temple nke Kedarnath. Na-asọpụrụ na nsọ nsọ ma na-aga eleta Adi Shankaracharya Samadhi, nke dị n'azụ ụlọ nsọ. Laghachi na nkwari akụ maka otu abalị.
Mee njem gaa Gaurikund n'ụtụtụ, na mgbe ị bịarutere ụgbọala gaa na Pipalkoti. N'uhuruchi ị ga-eleba n'otu ụlọ nkwari akụ na Pipalkoti. Dinaa ma nwee obi ụtọ n'otu abalị na nkwari akụ.
N'ụtụtụ, kwupụta nri ụtụtụ, gaa Shri Badrinath Ji. E nwere ụlọ nsọ dị iche iche ga-ada n'ụzọ, dị ka Ụlọ Narsingh na Adi Shankaracharya Samadhi. Gaa na ebe ndị a ka ị nweta udo nke obi wee gaa n'ihu na Badrinath. Mgbe ị bịarutere, lelee n'ime ụlọ nkwari akụ. Ka oge na-aga, were nsụpụ dị nsọ na Tapt Kund, wee gaa nleta ụlọ nsọ dị na ya. N'ehihie ehihie, gaa na Mana Village, obodo ikpeazụ dị n'ihu ókèala Tibet, Bheem Pul, Byas Cave & Ganesha Cave. Naghachi azụ na Badrinath na mgbede i nwere ike ịga na arụsị maka Aarti Darshan. Mgbe e mesịrị, nwee obi ụtọ n'otu abalị na nkwari akụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ bath nke dị nsọ nke Sri Badrinath, bilie n'oge ụtụtụ 03: 30 ma hụ ọhụụ mara mma. Mgbe nri ụtụtụ na-aga Rudraprayag site na Joshimath, Chamoli, Nanda Prayag na Karna Prayag. Mgbe ị bịarutere, lebanye na họtel ma nwee ezigbo oge ịnọ jụụ.
Na ngwa ụtụtụ gaa Rishikesh site Srinagar na Devprayag. Devprayag bụ confluence nke osimiri nsọ Alaknanda na Bhagirathi; mgbe ha zutere n'ebe a, mmiri mmiri abụọ a dị n'otu ka ha jikọta ọnụ iji mepụta Ganges. Ozugbo risiri na Rishikesh, lelee n'ime ụlọ nkwari akụ. Ka oge na-aga, gaa Laxman Jhula, otu abalị na-anọ n'ụlọ nkwari akụ ahụ.
N'ụtụtụ mgbe nri ụtụtụ, laghachi azụ na Delhi. Gaa na Delhi site n'ehihie. Ntugharị na Ọrụ kwusi.